ပြည်သူမှပြည်သူသို့ ကြက်ဥတစ်လုံး ငွေတစ်ကျပ်နှုန်းနဲ့ မျှဝေ - Myanmar Pressphoto Agency
ပြည်သူမှပြည်သူသို့ ကြက်ဥတစ်လုံး ငွေတစ်ကျပ်နှုန်းနဲ့ မျှဝေ
Covid_19 Donation MPA Myanmar News Pressphoto
Covid_19 July 25, 2021 ·0Comment
ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်လမ်း ရှိ ဆန်းသစ်စတိုး၌ ကြက်ဥတလုံးလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ကျပ်ဖြင့် လူတစ်ဦးကို ငါးလုံး နှုန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီး ကြက်ဥ အလုံးရေ ၂၅၀၀ ရောင်းချခဲ့သည့်အပြင် ပါရာစီတမော ကဒ် တထောင်ကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“အခုချိန်မှာ အဖက်ဖက်က ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကျွန်မဖက် က တနိုင်တပိုင်လေး လုပ်ပေးတာပေါ့ အဆင်ပြေအောင်၊ ပြည်သူမှာ ပြည်သူပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလဲ ရှိတာကိုလေ” ဟု ကြက်ဥနှင့် ဆေးကဒ်များ ရောင်းချ လှူဒါန်းပေးခဲ့သူ ဆန်းသစ် စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုသည်။
ကြက်ဥ တလုံးကို မြန်မာကျပ်ငွေ တကျပ် ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း တကျပ်တန်မှာ ရှားပါးနေသည့်အတွက် ၅၀ ကျပ်တန်နှင့် ၁၀၀ကျပ်တန်များ ပေးပြီး ဝယ်ယူသူများကိုလည်း လက်ခံရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ငွေကြေးမပါသူများကိုလည်း လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၂ နေ့ကလည်း စမ်းချောင်းမြို့နယ် မြေနီကုန်း အနီးမှ Flannel Box အဝတ်အထည်ဆိုင်သည်ကြက်ဥတလုံးလျှင် ၅ ကျပ်ဖြင့် လူတယောက်ကို ဆယ်လုံးနှုန်း၊ ကြက်ဥအလုံး ၁၅၀၀ ရောင်းချပေးခဲ့သည်။
ယခုအခါ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများ​၏ ကုန်ဈေးနှုန်း အလွန်အမင်း မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် စစ်ကောင်စီ​၏ ဈေးကွက်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူအများစုမှာ ခက်ခဲကျပ်တည်းလျက် ရှိနေပြီး နေအိမ်အတွင်း မကျန်းမာဘဲ ဖျားနာနေသူ မိသားစုအချို့မှာ အစားအသောက်ပြတ်လပ်ခြင်းအတွက် အလံဖြူ သင်္ကေတနှင့် ဆေးဝါးပြတ်လပ်ခြင်းတို့အတွက် အလံဝါ သင်္ကေတ ချိတ်ဆွဲကာ အကူညီတောင်းခံရမှုမျိုး အများအပြားရှိနေသည်။
စေတနာရှင် ပရဟိတ လူငယ်များနှင့် အလှူရှင် များမှ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် “ပြည်သူမှာ ပြည်သူပဲရှိတယ်” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို ကိုင်စွဲကာပြည်သူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းလှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်နေရသည်။
Selling One Egg Per One Kyat
Today, on July 25, on Pan Hlaing street, Shan Chaung township of Yangon region, San Thit Store sold one egg for one Myanmar kyat withalimit of five eggs per buyer. A total of 2500 eggs were sold andathousand Paracetamol cards were also donated.
“As we’re all struggling on all sides, I’m helping with what little I have asasaying that there is only people for the people,” the store owner of San Thit store said.
Even though it was sold at one kyat per egg, they received 50 notes and 100 notes instead as 1 notes are rare now and some with no cash were also given as donation.
Flannel Box clothing shop also sold one egg per five kyats on July 22 with 10 eggs per person andatotal of 1500 was sold.
As food and drug prices have gone increasingly high due to the SAC’s inability to control the market, the majority of the public have been locked up in their homes and many of those with sickness have put upawhite flag for food help andayellow flag for medical help.
Charity organizations, youth volunteers and donors have been helping the public out of their own pockets holding the motto: ‘The people only have the people.’